Manomboka amin’ny 11 Novambra izao ny Filankevitra 2021 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Oktobra 2021 1:59 GMT
Hafaliana ho anay ny muilaza fa ny 11 Novambra ho avy izao no atombotsika ireo hetsika rehetra, ary hitohy hatramin'ny herinandron'ny 6 Desambra.
Ho an'ny Filankevitra 2021, hisy fivoriana Zoom ho karakaraina ary homenay fahafahana ireo mpikambana ao amin'ny Filankevitra mba hiditra amin'ny fifampiresahana an-tambajotra ao amin'ny Vondrona Google an'ny Filankevitra sy ny Bilaogin'ny Vondrompiarahamonina, ary hitondra anjara biriky amin'ireo hevitra sy faniriany manokana amin'ny alàlan'ny fitsapankevitra iray momba izay lasitra ho an'ny iraka hotontosaina amin'ny hoavy.
Tsy andrinay fatratra ny hahita anareo hiaraka aminay mandritra ny dingana Filankevitra, araka izay azonareo atao. Mandritra ireo herinandro efatra ireo, ho azon'ireo mpikambana atao ny mandray anjara mivantana amin'ny antso Zoom roa misaraka sy tsy mifanindry, sady mamaky no mieritreritra momba ireo famelabelarana sy taratasy iray fanazavàna antsipirihany ny lohahevitsika.
GV@20 no lohahevitsika. Amin'ny 2024, feno 20 taona ny Global Voices! Tahaka ny tena tsy azo noeritreretina izany fanambaràna izany ho an'ireo izay nanomboka ny Global Voices tamin'ny Desambra 2004. Kanefa, tena efa akaiky io daty io.
Manomboka amin'ny 11 Novambra, hisy andiana fifanakalozan-kevitra ho ataontsika momba ny hoavin'ny Global Voices. Hojerentsika ireo hetsika misy amin'izao fotoana sy ny fahasalaman'ny fikambanantsika, ho avoakantsika ny iraka tontosaintsika ary hokarakaraintsika ny kianja hisian'ny fifanakalozan-kevitra momba izay tetika ho an'ny taona telo manaraka.
Hisy lahatsoratra hozaraintsika momba ny lohahevitra GV@20, ka ao anatiny no anomezantsika ny antsipirihany momba ireo fanambaràna mikasika ny iraka sy ny vina notontosaina tany aloha, ary hanolorana ireo lasitry ny fanambaràna ho an'ireo iraka hataontsika amin'ny hoavy izay hanampy antsika hampifantoka ny asantsika ho an'ireo taona telo manaraka.
Ny fandaharam-potoanantsika mandritra ireo hetsiky ny Filankevitra:
Fihaonana voalohan'ny Filankevitra: ny toeran'ny GV, famelabelarana momba ireo tetikasa, ny ara-bola, ny isantsika, ny fahombiazana. Hisy fihaonana roa samy haharitra 90 minitra hatao mba hampifandrindràna ny hasinora (time zones) amin'ireo daty ireo (iray amin'ireo ihany no ilainao atrehana!):
11 Novambra: Alakamisy 1 ora tolakandro UTC
13 Novambra: Sabotsy 3 ora tolakandro UTC
Fizaràna ny antontan-kevitra“GV@20”, izay mandalina ireo fanambaràna ny iraka tany aloha sy, ary manolotra sosokevitra ho an'ny lasitry ny fanambaràna iray vaovao momba ny iraka hotontosain'ny Global Voices, mba ho soridalan'ny asantsika amin'ny hoavy.
Fifanakalozan-kevitra an-tambajotra ao anatin'ny lisitry ny Filankevitra sy ny Bilaogin'ny Vondrompiarahamonina.
Fihaonana faharoan'ny Filankevitra: Fifanakalozan-kevitra momba ny taratasy “GV@20”. Hisy fihaonana roa samy haharitra 90 minitra hatao mba hampifandrindràna ny hasinora (iray amin'ireo ihany no ilainao atrehana!):
18 Novambra: Alakamisy 1 ora tolakandro UTC
20 Novambra: Sabotsy 3 ora tolakandro UTC
Fitsapàna ny hevitry ny Filankevitra momba ireo safidy ho an'ny lasitra:
Fihaonana fahatelon'ny Filankevitra: fifanakalozan-kevitra momba ireo vokatry ny fitsapànkevitra, fampidirana ny dingan'ny tetikady 2022-24, jeritodika momba ny Filankevitra 2021. Hisy fihaonana roa samy haharitra 90 minitra hatao mba hampifandrindràna ny hasinora (time zones) amin'ireo daty ireo (iray amin'ireo ihany no ilainao atrehana!):
9 Desambra : Alakamisy 1 ora tolakandro UTC
11 Desambra: Sabotsy 3 ora tolakandro UTC
Tsy andrinay ny hihaonana amintsika amin'ny Novambra! Handefa fampahatsiahivana sy fanambaràna hafa ihany koa izahay rehefa manakaiky ny daty.
09 Oktobra 2021Mediam-bahoaka
Songadina Global Voices volana Septambra 2021